गोलमालबाट चर्चामा आएका हाँस्यकलाकार पवन खतिवडा म्याकुरले गरे धुमधामसँग विबाह – Gazabkonews
गोलमालबाट चर्चामा आएका हाँस्यकलाकार पवन खतिवडा म्याकुरले गरे धुमधामसँग विबाह
कक्षा १२ को परीक्षामा व्यस्त रहेकी अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले फोन गरेर राखे यस्ता रोचक जिज्ञासा, करिश्मा बोल्नै सकिनन्
बिपना थापाको परिवारमा के भयो ?
के बिराए र हल्का रमाइलोका राजु मास्टरले ? प्रहरी राजुकै घरमा पुगेर राजुलाई समात्यो
बिश्वकर्मा पुजाको दिन धर्ती माताले भद्रकालीमा देखाइन अर्को शक्ती, हेर्नुस रुखमा चडेर यस्तो ताण्डब गरेपछि सबै भक्तहरु रोए
आकाशले अघिल्लो महिना १ करोड रुपैयाँ हालेर किनेको शानदार गाडीमा पल शाह र आकाश घुम्न निस्किए
मासु र कपडा लिएर प्रियंकालाई भेट्न पुगिन् दिपा
८ वर्षदेखि प्रेम गर्दै आएका प्रेमीलाई धरधर्ती रुवाएर अर्का धनाड्य युवकसँग विबाह गर्दै चर्चित नायिका नम्रता सापकोटा
मलाई बचाउ भन्दै भक्कानिइन् मेरी बास्सैकी पल्पसा, के किड्नी दिने मानिस नपाएकै हुन् पल्पसाले ? आमालाई अंगालो मार्दै पल्पसा रोएको भिडियो भाइरल
अन्तत: सबिन श्रेष्ठ र अनु शाहले गरे विबाह
जिया केसीसँग सुटुक्क विबाह गरे भुवन केसीले
पूजासँग ब्रेकअप भएसँगै गरिमाको प्रेममा परेका आकाशले गरे इन्गेजमेन्ट
बुढेसकालमा विबाह गरे मेरी बास्सैका दाह्री बाले, दाह्रीजस्तो मान्छेसँग विबाह गर्न पाउँदा उनकी यि पत्नि छिन् खुशीले फुरुगं
गोलमालबाट चर्चामा आएका हाँस्यकलाकार पवन खतिवडा म्याकुरले गरे धुमधामसँग विबाह, गोलमालकी खुईली त मिल्ने साथी मात्रै रहिछन् आफ्नै खास प्रेमीकासँग गरे सुटुक्क विबाह, विबाहपछि प्रेमिकाले तस्विर बाहिर ल्याएपछि खुल्यो यि दुईको सुटुक्क गरेको कामको रहस्य, आखिर को हुन् म्याकुरीलाई पतिका रुपमा पाएकी भाग्यमानी युवती, हेर्नुहोस् यि दृश्यहरु
शाहरुखको भन्दा कम छैन पत्नी गौरीको कमाइ उनको कमाइ, सुनेर पर्नुहुनेछ छक्क : बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् शाहरुख खान । सय करोड पारिश्रमिक लिएर चर्चामा आउने उनी बलिउडै धनी अभिनेतामा गनिन्छन् । श्रीमति गौरी खानसँग बिहे गरेका शाहरुखले गौरीलाई अत्यन्तै माया गर्छन् । बलिउडमा यो जोडीलाई नमुना र अब्बल जोडीको रुपमा लिइन्छ । शाहरुखसँगै उनकी श्रीमति गौरी खान फिल्म निर्माता तथा डिजाइनर हुन् ।
उनी कमाइको मामलामा शाहरुख भन्दा कम छैन । शाहरुख भारतको सबैभन्दा महंगो अभिनेता भए जस्तै श्रीमति गौरी भारतकै ठूलो इन्टेरियर डिजाइनर हुन् । उनले मुकेश अम्बानी, रोबर्टो काभाली र राल्फ लाउरेन जस्ता हस्तीको घर डिजाइन गरिसकेकी छन् ।
यो पनि, फ्यानले दिए राखीलाई महङ्गो मोवाइल फोन
मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री तथा मोडल राखी सावन्तलाई एक फ्यानले महँगो मोवाइल फोन उपहार दिएका छन् । उक्त फोन पाएर उनी निकै खुसी छन् । जुन खुसी उनले इस्टाग्राम एकाउन्टबाट भिडियोसहित शेयर गरेकी छन् । फ्यानले गिफ्ट गरेको मोवाइल फोनको मूल्य ‘भारु’ डेढ लाख रुपैयाँको रहेको छ । गिफ्ट खोल्दा उनी निकै एक्साइटेट समेत देखिएकी छन् । गिफ्ट खोलेपछि उनले भनेकी छन् ‘यति ठुलो फोन कसरी हुन्छ ? ।’
उनीलाई उक्त गिफ्ट एक बच्चीले दिएकी हुन् । गिफ्ट खोलेपछि उनले उनको ती बच्चीको गालामा चुम्बन समेत गरेकी छन् । राखीको यो भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ । फ्यानले राखीलाई नयाँ फोनका लागि बधाई समेत दिएका छन् । हमेशा चर्चामा रहने अभिनेत्री राखी ‘बिग बास १४’ मा समेत देखिएकी थिइन् । यो सोमा सबैको मन जित्न सफल उनको शोका कारणले फ्यान फ्लोइङ समेत बढेको थियो ।